White cohosh (ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင်) - Hello Sayarwon
White cohosh (ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင်)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » White cohosh (ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင်)
White cohosh (ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင်) ကဘာလဲ။
ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
White cohosh ဟာ သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အပင်တမျိုး ဖြစ်ပြီး အပင်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးဟာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပေမယ့် အောက်ပါရောဂါအခြေအနေတွေကို ကုသဖို့ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။
အချို့သော သေအံ့ဆဲဆဲလူနာတွေကို white cohosh သုံးပြီး အသက်ကယ်ဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိကြပါသေးတယ်။white cohosh ကို အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သေးတာမို့ အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ထံ မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
white cohosh သို့မဟုတ် အခြားသော ဆေးများ၊သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပင်များမှ ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်။
ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
white cohosh အပင်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးက အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတာမို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ချိန်မှာ လုံးဝအသုံးမပြုရပါဘူး။
ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
အပင်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးက အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ၊သွေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ။
white cohosh ဟာ အရေပြား ရောင်ရမ်းခြင်း၊အရည်ကြည်ဖု ထခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ အသားနဲ့တိုက်ရိုက်ထိခြင်းကို ရှောင်ရှားရပါမယ်။
ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
white cohosh ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် မသုံးစွဲခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာ တိုင်ပင်ရပါမယ် (အထူးသဖြင့် သင့်မှာ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ရှိနေရင်)။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ white cohosh ဟာ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် အဆိုပါပြဿနာတွေကို ပိုဆိုးလာနိုင်စေလို့ပါ။
ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
အပင်မြစ် တဆနဲ့ 80%အယ်လ်ကိုဟော နှစ်ဆကို ရောနိုင်ပြီး အမြစ်ခြောက်အတွက်ဆိုရင်တော့ အပင်မြစ် တဆနဲ့ အယ်လ်ကိုဟော ငါးဆကို ရောပါ။ ပြီးရင် ၁၀စက် ကနေ ၁၅စက်ခန့် ပမာဏကို တနေ့ကို လေးကြိမ်လောက် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အခြားသော တင်ချာများနည်းတူပါပဲ white cohosh အမြစ်ကို မသုံးစွဲမီ အနည်းဆုံး တလလောက် ဒီအတိုင်းထား ထားရပါမယ်။ လူနာတယောက်နဲ့ တယောက် သုံးစွဲရမယ့် ဆေးပမာဏက တူချင်မှ တူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အသက်အရွယ်၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ အခြားရောဂါတွေ ရှိမရှိပေါ်ကို မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏ ကွာခြားပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖြည့်စွက်အားဆေးတွေဟာ အမြဲတမ်းလုံခြုံစိတ်ချရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်လျော်တဲ့ ဆေးပမာဏကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ကြိုတင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမယ်။
ကိုဟော့ရှ်အဖြူပင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
White cohosh. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-
ohosh. Accessed December 26, 2016.
White cohosh. https://www.drugs.com/npp/white-cohosh.html. Accessed